यो संसार च’टक्कै छो’डेर भाग्न मन’ भनेर टिकटकमा अपलोड गरेको डेढ घण्टा’मै श’व फे’ला ! – Dainik Sangalo
यो संसार च’टक्कै छो’डेर भाग्न मन’ भनेर टिकटकमा अपलोड गरेको डेढ घण्टा’मै श’व फे’ला !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८ समय: १७:१०:२७
साउन २८ गते बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’मा अपलोड भएको एउटा भिडियो अहिले भा’इ’रल भइरहे’को छ।शुक्रबार बिहानसम्म ५८ हजार बढीले हेरिसके’को टिकट’कमा भनिएको छ, ‘सा’च्चै आ’ त्म ह’ त्या ग’र्नेहरु’का ग’ज’ल य’स्ता हु’न्छन् हो’ला ह’गी–एक मुठी सास छ त्यही नि त्या’ग्न म’न ला’ग्छ, यो सं’सार च’ट’क्कै छो’डेर भा’ग्न मन लाग्छ।’
त्यो टिकटक अपलोड गर्ने युवती हुन्, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ की २० वर्षीया रुपा शर्मा। टिकटक अपलोड भएको डेढ घण्टामै रुपा’ले दे’ह’त्या’ग गरे’की छि’न्। मृ’त्यु’प’छि रु’पा’ले बनाए’को टि’कटक अहिले भा’इ’र’ल भ’इ’रहेको छ। हेल्थ फर ह्याप्पिनेस सुदूरपश्चिमका संयोजक घनश्याम भण्डारी’लाई रुपा’ले दे’ह’त्या’ग गरे’को वि’श्वास लागेको छैन। ‘मैले बिहीबार साँझ फेसबुकमा रुपा’को मृ’त्यु’को ख’बर दे’खे,’ भ’ण्डा’री’ले भने, ‘एक दिन अगाडि मात्रै देखेको थिए। दोस्रो दिन य’स्तो घ’ट’ना सु’न्नु प¥यो।’
उनका अनुसार रुपाले सामाजिक कार्यमा पनि कयौँ पटक सहयोग गरेकी थिइन्। ‘उनमा गलत विषयको विरुद्धमा आवाज उठाउने साहस थियो। साहित्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय थिइन्। आफैँमा सक्षम र निडर व्यक्तिले यस्तो गरि’न भनेर अझैँ पनि विश्वास लागेको छैन,’ भण्डारीले भने।
धनगढी बस्दै आएका रोहित चन्द भन्छन्, ‘अछामको कैलाख खोलाको बाढीले धनजनको क्षती गर्दा राहत संकलनमा रुपाले देखाएको सक्रियता सम्झन लायक थियो। सामाजिक कार्यमा सक्रिय युवती’ले दे’ह’त्या’ग गरे’को ख’बर विश्वास गर्न मु’स्किल छ।’ उनका अनुसार सामाजिक कार्यसंगै साहित्यमा पनि रुपाको बढी नै रुची थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र गुरुका अनुसार रु’पा आ’फ्नै को’ठा’मा मृ’ त फे’ला प’रे’की हुन्। ‘झु’न्डि’ए’को अ’व’स्था’मा मृ’त अ’व’स्था’मा फे’ला परे’की थि’इन्,’ उनले भने, ‘भित्र’बाट ढो’का ब’न्द थि’यो। प्रारम्भिक अ’नुसन्धान’मा आ’ त्म’ह’त्या गरे’को दे’खिन्छ।’ उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय’मा जाहे’री द’र्ता भइसकेको बताउँदै घ’टना’बारे अ’नुसन्धान हु’ने बताए।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल??? क्लिक गर्नुहोला *****
Last Updated on: August 13th, 2021 at 5:10 pm